Kooxo hubaysan oo aan la aqoon oo toogasho ku dilay sarkaal militari gudaha Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaKooxo hubaysan oo aan la aqoon oo toogasho ku dilay sarkaal militari gudaha Muqdisho
September 18, 2016 Abdi Omar Bile Somalia, South-Central 0
Ciidamada dowlada federaalka Soomaaliya.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Niman baastoolado ku hubaysan oo aan la aqoon ayaa toogasho ku dilay magaalada Muqdisho caawa oo Axad ah fiidkii sarkaal ciidamada militariga Soomaaliya katirsan oo la dhaho Kornayl Cabdulaahi Sabriye, sida ay sheegeen goobjoogayaasha.
Nimankii hubaysnaa ee dilka geystay ayaa ka cararay goobta uu dilka ka dhacay, sida ay goobjoogayaasha sheegeen.
Maalinimadii Axada, sarkaal sare oo katirsan ciidamada militariga dowlada Soomaaliya oo la oran jiray Maxamed Rooble Jimcaale loona yaqiin Goobaale iyo lix kamid ahaa ilaaladiisa ayaa lagu dilay Muqdisho kadib markii gaarigiisii lala beegsaday qarax gaari.
Kooxda hubaysan ee Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay iyagu ka dambeeyeen qaraxa gaariga ee lagu dilay Goobaale.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa laga saaray magaalada Muqdisho sanadkii 2011-kii, balse maleeshiyada ayaa wali wada weeraradeeda ku dhufoo ka dhaqaaqa ah oo ka dhanka ah dowlada Soomaaliya iyo bartilmaameedyada militari.
July 12, 2016 Wefdi ka socda IGAD oo gaaray Beledweyne
Puntland oo koonfurta Soomaaliya dib ugu celisay in ka badan 30 tahriibayaal ah oo kusii jeeday Yeman
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa dib ugu celisay in ka badan 30 qof koonfurta Soomaaliya, sida ilo-wareedyo u xaqiijiyeen warsidaha Puntland Mirror. Sida ay ilo-wareedyadu sheegeen, dadka dib loo ceshay ayaa waxaa qabtay haayadaha ammaanka Puntland [...]
Former Khaatumo President accuses Somaliland of killing two officials in Buuhoodle
Garowe-(Puntland Mirror) Former Khaatumo President Mohamed Yousuf Indhosheel accused Somaliland of killing two officials in Buuhoodle. Speaking to local media, Indhosheel who is in Garowe, has accused Somaliland of being behind the killing of Abdifatah [...]